Abavelisi beengxowa zebhayisekile Indawo
Ikhaya > Iimveliso > Ibhegi yebhayisekile
1. Singqongqongqo ngokhetho lwezinto ezibonakalayo kunye nokulungisa, ukusebenzisa i-Zip zamanzi kunye ne-Zip ikhava ukuze i-zip ayiyi kukhululeka ngokulula. Sebenzisa i-Teard Portiverant exhaphakileyo ye-1000D Polyster + i-PVC ephindwe kabini ye-PVC
2. Ukuze ndikunike ukukhwela ixesha elide ukubonelela ngesiqinisekiso esiqinisekileyo, ibhegi yethu yebhayisekile Sebenzisa i-Adving Adving Adving Adprood Bight Pight Pight Points, i-In-Coun-Roun-Sun-Poly Polyster kunye ne-Oxford Esetyenziselwa iingxowa eziqhelekileyo.
3. Umaleko ophakathi onezinto ezili-1000 ze-pontusters-i-pontusters ephindwe kabini, umphezulu nangaphakathi usebenzisa i-PVC yoKhuseleko lweNdawo ePhezulu, ukungavisisani, ukuxhathisa amanzi, ukunyangwa okuphezulu kunye nobunzima bebhegi yebhayisikile yamanzi.
4. Isitayile sobumbano esinemilinganiselo emithathu enoxinzelelo oluthe tye ngokucofa kwaye i-anti-skratch. Ukusetyenziswa komhlaba wokusebenzisa izinto ze-PVC, ezithambileyo kwaye zigudileyo, ngenkqubo yokuqhubela phambili ye-welding ye-Welding, ibhegi yonke ngaphandle kokutsalwa kwetyhefu yomzimba, inokufezekiswa ngokupheleleyo. Izinto ngokubanzi azizukonakalisa kule ngxowa.
5. Xa uphuma ekukhwele indlela enodaka, ibhegi yonke iphantsi kwe-subdges yodaka, uya kuba sengxakini kwindlela yokucoca. Awusafuneki ukuba ususe ingxowa yonke icocekile, kufuneka nje ukuthoba ngamanzi kwaye usule ngetawuli ifumaneka.
Ingxowa yethu yebhayisekile eyenzelwe ngokukhethekileyo yokuhamba, ukuqinisekiswa komgangatho kunye nokuthenjwa.